Cusbooneysiinta - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/updates
2022-03-15T20:30:43-04:00March 15th, 2022|
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Qalabka Gargaarka Masiibada ee Grassroots, oo ah goob mareegaha taageerta isgaarsiinta guud ahaan dadaallada masiibada ee shabakadeena baahsan, ayaa hadda nool! Anagoo kaashanayna Gargaarka Mutual Aid Relief, waxaan naqshadeynay oo [...]
Laga bilaabo 2019/2020 oo hadda sii socota xagaaga 2021, bulshada rayidka ah ee adduunka ayaa markhaati ka ah naxdinta ugu weyn ee caasumadda neoliberal weli: COVID-19. Malaayiin dad ah ayaa ku dhintay oo ay sii wadaan dilka [...]
Warbixinta soo socota ayaa dib uga soo ceshatay saaxiibadeena West Street Recovery, kuwaas oo abaabulayay illaa saddex sano oo ay ka soo kabsanaysay duufaantii Harvey isla markaana siinaya taageero joogto ah kooxaha bulshada [...]
Weli waxaan ku jirnaa duufaanno iyo xilliyadii dabka, horayna 2020 waxay sanad taariikhi ah ugu noqotay tirada, baaxadda, iyo saameynta masiibooyinka. Dabka ayaa ka gubanaya guud ahaan Xeebta Galbeed. Duufaannada [...]
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, laga bilaabo masiibada oo ku fidday fallaagada hadda jirta, waxaa jiray ubax qurux badan oo is-afgarad ah. Mashaariicdani waxay ka soo baxeen abuur ka mid ah wada-jir ahaan hore u jiray [...]
Monica Trinidad "Waxaan ilaalinaynaa midba midka kale oo nabad ah" In kasta oo aan ka murugaysanahay khasaaraha nagu hareeraysan, waxaan si isku mid ah u helnaa kalsooni adduunka si lama filaan ah kumanaan kun oo kaalmooyin is-kaashaday ah [...]
Wadajirka xagjirka ah ee loo maro Covid-19 abaabulka bulshada ee wadajirka iyo wadajirka caafimaadka ayaa ka sameysmay meelo badan oo ka mid ah coronavirus-ka cusub (Covid-19). Qaarad ilaa qaarad, dadku waxay ikhtiraaceen oo ay dhex mareen [...]
Shabakadaha taageerada labada dhinac ee Puerto Rico ee ubax ubax ka soo ifbaxaya kadib Hurricane Maria, waxay muujinayaan sida waxqabadka gargaarka ee labada dhinac ay u dhisaan awood iyo adkeysiga dhibaatooyinka mustaqbalka, labadaba [...]
Bishii Janaayo 7-deedii, 2020, dhulgariir culeyskiisu yahay 6.4 ayaa ku dhuftay Puerto Rico, kaasoo sababay waxyeelo baahsan oo ka dhacday koonfurta oo si kumeelgaadh ah u jartay jasiiradda oo dhan. Waxaa jiray kumanaan dhulgariir iyo gariir ka bilowday [...]
PG&E waxay ku fashilantay dadka reer California. Shirkaddu waxay balaayiin doolar siineysaa maalgashadayaasha iyada oo u marsiineysa lacagaha faa iidada ah iyo lacagaha la siinayo siyaasiyiinta halkii ay ku sameyn laheyd dayactirka lagama maarmaanka u ah halista dabka ee gabowga [...]
Apoyo Mutuo: Awoodda Dhisidda Jannada
In ka badan laba sano kadib Hurricane Maria, Centros de Apoyo Mutuo wali waa mid firfircoon, dadka awood u leh, tusaalooyin ku nool gargaarka labada dhinac iyo iska caabbinta ku saleysan bulshada iyo adkeysiga. Bulshada ku nool Bucarabones ee Las Marias, isla markii […]
Musiibada Caddaynta Cad ee Musiibada
Xagaagan ayaa la sheegay in tirada dhimashada ay kor u kaceyso iyada oo ay sii kordhayaan falalka cadowga ee argagixisannimada ee dalka oo dhan. Gobolka, oo ah wakiilka kale ee argagaxisada cadawga, ayaa sii waday ololihiisa maamulka ee ah in caruurta laga qaado waalidkood, iyo [...]
Dorian, Imelda, iyo inbadan
Saaxiibbada salaan! Kaliya waxaan rabay inaan idin cusboonaysiino oo ku saabsan qaar ka mid ah howlaheedii ugu dambeeyay. Bishii Sebtembar 1, Hurricane Dorian, oo ah nooca duufaanta '5', ayaa go’aamisay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan jasiiradaha Waqooyiga Bahamas ee Grand Bahama iyo Abaco. [...]
Khadka Khadka Jawaabta ee Madax-bannaan ee Dorian
Hurricane Dorian ayaa burburiyey Bahamas wuxuuna baabi'inayaa burburin wuxuuna duufayaa duufaano xeebta bari. Malaayiin dad ah ayaa amar lagu siiyay inay uga guuraan badda xeebta bari, waxaana durba jira saameyno duufaano [...]
Waxyi & Taakuleyn loogu diyaar garoobayo Musiibo
Markii aan galno xilli duufaan ah xilliyada Atlanta iyo xilliyada dabka ee galbeedka, Mutual Aid Musiibo Relief waxay soo uruurineysaa talooyin loogu talagalay u diyaarinta jaalliyadaha inay is ilaashadaan midba midka kale [...]